Antoine Griezmann oo ku dooday in Barcelona ay ka badin karto kooxda Real Madrid la’aanta Lionel Messi – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Antoine Griezmann oo ku dooday in Barcelona ay ka badin karto kooxda Real Madrid la’aanta Lionel Messi
Sabti, October, 27, 2018(HNN) Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa aaminsan in kulanka El Clasico uu noqon doono mid aad u wanaagsan, sida kulamadii lasoo dhaafay oo kale ay soo wada ciyaareen kooxaha Real Madrid iyo Barcelona.
Antoine Griezmann ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee ESPN wuxuu kaga hadlay xiisaha kulanka El Clasico ee bari ka dhici doono garoonka Cump Nou, kaasoo ka tirsan kulamada 10-aad ee horyaalka La Liga ee dalka Spain.
“Wuxuu noqon doonaa kulan weyn ee El Clasico sida kulamadii lasoo dhaafay oo kale, waa nasiib daro in Lionel Messi uusan kulankan qeyb ka noqon doonin”.
“Laakiin Barcelona waxay awoodaa inay guul gaarto kulankan la’aanta Lionel Messi, sidoo kale Real Madrid waxay u baahan tahay inay guul gaarto, sidaas darteed kulanka wuxuu noqon doonaa mid aad u wanaagsan”.
Antoine Griezmann oo ku dooday in Barcelona ay ka badin karto kooxda Real Madrid la’aanta Lionel Messi added by admin on October 27, 2018